SAWIRO: Nin u LUGEEYAY Xajka 6000- oo Kilo Mitir sanadkan. - Wargeyska Faafiye
Home 2012 October 22 .Warka, Headlines . SAWIRO: Nin u LUGEEYAY Xajka 6000- oo Kilo Mitir sanadkan.
October 22, 2012 · by	Liban Farah ·
Ninkan ayaa Umada caalamka la Yaaben arintan uu sameeyay.
Waxaa uu Safarkan Soo Bilaabay Bishii December (12) ee Sanadkii 2011 isagoo soo gaaray Magaalada Barakeeysan ee Makkah Maalintii Sabtida, isaga oo diyaar u ah in uu Guto Xajka iyo dawaafka Sanadkan .
Gegi diyaaradeed oo lala wareegay Ukraine.